Fire lavaka sy mitono hena BBQ Grill Natambatra Outdoor Antoko - China Shijiazhuang HGW Trading
Swimming Pool simika
fanasana vilia Tablet
ivelan'ny trano Product
Ary mbola hanohon trano falafa
Garden fanaka / rattan fisakafoana latabatra sy ny seza
Ivelan'ny trano masoandro nofonosiny lounger
Vintage Metal Framed wicker sezany izy ary Glass Top Tabl ...
Gray vaovao mahazatra fanaka rattan wicker fandriana ambony seza
Rattan ambony seza Set 4 Piece Patio Furniture seza ambony seza ...
Outdoor Garden Furniture Hanorina Rattan Table seza izany ...
Blue Garden Patio Furniture Set Dining Mametraha Table sy ...
Ivelan'ny trano fanaka Rattan fanaka latabatra fisakafoana, ary ...
Fire lavaka sy mitono hena BBQ Grill Natambatra Outdoor Party
Fandoavam-bola Type: T / T
Min. Order: 1 Set / Sets
Alefaso mailaka ho anay
Endri-javatra: mora diovina
Fitaterana: Ocean, Air
Fire lavaka sy mitono hena BBQ Grill Natambatra Outdoor Party Events Modern Hahasarika
Lavaka ivelan'ny trano afo sy BBQ Grill Natambatra
Ity ambany afo anivon'ny lavaka avo roa heny toy ny BBQ Grill , mijanona mafana sy mahandro ny sakafo maivana ny matsiro tamin'izany andro izany!
Ny kianja Grill Grid avy amin'ny ampahany roa mba hahafahanao manana sakafo mahandro sakafo andaniny sy ny hafanana avy eny ny hafa.
Lehibe ho an'ny antoko sy ny zava-nitranga ara-tsosialy toy ny olona dia afaka mahandro ny sakafo manodidina ity foibe multipurpose tapa.
Inside ny mainty rindrin 'ny afo lavaka ho hitanao ny hafanana mahatohitra varnished vy afo vilia baolina, mihoatra noho izany no safidy mba hifanaraka Chrome roa nopetahany takela grids mahandro sakafo.
Ny kianja kilalaon'afo Kendreo miaro ny mpiambina mifanaraka amin'ny toerana sy voaaro dia ahitana ny famohana an-tampon'ny ho mora ny niala tsy manainga ny amin'ny lafiny mafana.
Ny manan-tsaina afo lavaka mainty manana tongotra efatra matanjaka amin'ny Stainless vy ary afaka hapetraka na aiza na aiza ao amin'ny zaridaina, na izany eo amin'ny Patio, bozaka na gravelled faritra ny chunky tongony dia hitandrina ny afo lavaka soa aman-tsara ao an-toerana.
Izany no mahatanty ny 5 kilao ny saribao sy ahitana ny saribao Poker.
Io endri-javatra tsara tarehy ho zaridaina tsara na inona na inona, ary lehibe ho an'ny hanome hafanana sy ny mahandro sakafo.
484 sq.in.cooking area
Fire boaty: taratasy vy mainty hafanana avo-loko
Leg: Stainless vy
Sarony: vy tariby harato
Tafavory Product Dimensions: L16 * W61 * H52 (CM)
Item #: FP1401
Mitady lavaka famorian-drano tsara Fire BBQ Manufacturer & mpamatsy? Isika manana fantina lehibe amin'ny vidiny lehibe mba hanampiana anao hahazo famoronana. Ny Square Arina afo Lavaka Natambatra BBQ Grill no azo antoka tsara. Origin China izahay Factory ny Outdoor afo Lavaka sy BBQ Grill mitambatra. Raha toa ka manana fanontaniana, Aza misalasala mifandray aminay. Product Categories: Outdoor Product> BBQ Grill
Previous: BBQ Grill Stainless Steel Burners mitono hena amin'ny lafiny burner
Next: Fitaovana ivelan'ny trano Cooking Round Table Top mitono hena Grill
BBQ Camping Garden Patio Grill
Burners mitono hena Miaraka Side burner
Ce Fankatoavana Gas BBQ
Arina mitono hena Grill
namboarina Grill Miaraka Wheel
afo lavaka, ka mitono hena Grill
nofonosiny Outdoor Furniture
Tongotra efatra Kettle Barbecues
Garden Furniture tokotany
Garden Furniture wicker Rattan
Gas BBQ Amin'ny Side burner Grill
Hotel Rattan Outdoor Furniture
New 3 burner Gas mitono hena
Outdoor Cooking Fitaovana
Outdoor Garden BBQ Patio Grills
Outdoor Patio Furnitrue
Rattan High Garden Furniture
Rou ND wicker Patio Furniture
Smokeless Arina Grill
Sq uare Arina Grill Black Color
Stainless Steel Burners mitono hena
Table Top Arina Grill sy Side Afo Box
Tongotra efatra kettle barbecues namboarina Grill anaka ...
Family ivelan'ny trano Tabletop BBQ Camping Garden Pati ...
Ivelan'ny trano Round Table Cooking Fitaovana Top Barbe ...
Grill Square Arina Grill loko mainty
Arina Smokeless Grill Round Design Red loko